GarsoorNews - MUDANE MADAXWEYNE SOOMAALIYA XAGEE U SOCOTAA?!
by Farah C/laahi | Saturday, Jun 10, 2017 | 108 views
– Hadaba si aad u ogaatid aqristow jawaabta saxda ah. Miisaaniyada Xaafiiska Madaxweynaha waa 4milyan iyo dhowr boqol kun oo dollar. Mushaarkiisuna waa $96,000 dollar sanadkii. Afartii sano ee la soo dhaafayna isla sidaas uyuu u qornaa. Barlamaanka hada jirana si KMG ah ayuu u ansixiyay bishii April ee isla sanadkaan inta Miisaaniyad cusub laga sameynayo.
Waa wax laga xumaado in Madaxweynaha Qaranka uusan ogeyn miisaaniyada Xaafiiskiisa iyo mushaarkiisa inta uu yahay oo ku qorneed miisaaniyada Dowlada afartii sano ee lasoo dhaafay! Waa suurtogal Madaxweynuhu inuusan baahi u qabin mushaar! Laakiin danta Dalka iyo Dadka ayaa kujirta inuu ogaado qof waliba waxa uu Qaranka ku leeyahay ee xuquuq ah oo isagu ugu horeeyo si waajibaadka saarana lagula xisaabtamo!
– Madaxweynuhu waxa uu baalmaray Qaraarkii Golaha Shacabka soo saaray 30 April 2017 ee ku saabsanaa dib-u-habaynta iyo tayeynta Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya. Isagoo qaatay go’aamadii kasoo baxay shirkii Madaxda Qaranka iyo Madaxweyne yaasha Dowlad Goboleedyada ee Muqdisho lagu qabtay 16 April 2017.
Shirkaas oo Golaha Shacabka dhaliil aad u xoogan ugu soo jeediyeen Madaxdii go’aankaas gaartay. Kuna sheegeen go’aamadaas kuwa ay soo gaareen Dowlado Shisheeye laguna xalaaleysanayo gacmo Soomaaliyeed. Kadibna Madaxweynuhu waxa uu geeyay go’aamadaas Shirkii London si Beesha Caalamka oo markii hore lahayd soo jeedinta go’aamadaas markale looga meelmariyo. Bilaabayna dhaqan gelinta go’aamadaas isagoo og in uu jiro Qaraar Baarlamaani ah oo arintaas kahor imaanaya. Taasoo meesha ka saareysa doorkii Barlamaanka ee kor-joogtaynta iyo la xisaabtanka Hay’adaha Dowlada. Si cadna waxa uu ugu tumanayaa Madaxweynuhu Qaraar Dastuuri ah oo kasoo baxay Hay’adii Dalka ugu sareysay ee kalsoonideeda uu kursiga Madaxweyne nimo kula fadhiyo.
– Sida Madaxweynuhu dhowr jeer Warbaahinta ka sheegay Dalka Sacuudiga inuu u balan qaaday Soomaaliya taageero maaliyadeed oo gaaraysa 4bilyan dollar, ayna Dalka ka fulin doonaan mashaariic dhinacyo badan leh oo ay kamid yihiin: dib u dhiska ciidanka, la dagaallanka argagixisada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kabka miisaaniyadda Dowlada oo loo balan qaaday 50 milyan oo deg deg ah in qasnada Dowlada lagu soo shubi doono.
Waxaa intaas dheer oo Madaxweyne Farmaajo ku sheegay wareysigii wargeyska Sharq-Alawsat uu siiyay in markii uu la hadlayay Boqorka Sacuudiga, uu dareemay inuu yahay walaalka weyn Soomaaliya oo diyaar u ah inuu caawiyo. Waxa uuna sheegay in ammaanka boqortooyada uu ku xiran yahay ammaanka Soomaaliya oo aanan aqbaleynin in la xumeeyo. Hadaba aqristow maxaa dhacay?
– Maalin dhaweyd waxaa magaalada Muqdisho yimid La’taliyaha Boqorka Sacuudiga si Soomaaliya ay u taageerto mowqifka Sacuudigu ka qaadatey dalka Qadar. Kadibna Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay inay Soomaali dhex-dhexaad ka noqonayso khilaafka Sacuudiga kala dhaxeeya Qadar. Mowqifkaas oo la mid ah midkii Iran ay ka qaadatay go’doominta dalka Qadar.
Marka la fiiriyo go’aanka Dowlad Soomaaliya qaatay waxa ay martay dhanka xulafada Qadar. Waxaase intaas ka daran wafdigii loo deyriyay ee Sacuudiga ka socday diyaaradii ay wateen inay horay usii raacaan 6 Wasiir oo Xukuumada Soomaaliya katirsan oo doonaya lacagtii la balan qaaday iyo mashaariic kale ee Sacuudigu balan qaaday inay Soomaaliya ka hirgelinayso.
Markii wafdigii Soomaalida tageena waxaa loo soo diray agaasimeyaal. Waxaana lagu wargeliyay hadii ay lacag rabaan inay mowqifkooda badalaan, taageeraana xulafada Sacuudigu hugaaminayo! Sacuudigu waa Dal dhaqaale ahaan ay Soomaaliya ku xirantahay, sanadkii 2015 waxaa Soomaaliya Dalka Sacuudiga u iib geysay 5million neef oo xoolo ah. Mana jiro Dal Carbeed oo xiriir ganacsi oo intaas la’eg Soomaaliga kala dhaxeeyo. Carqalad ku timaada xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudigana waxay taabaneysaa nolosha muwaadinka Soomaaliga ah ee reer guuraaga ah.